नकारात्मकता नै वर्तमान साहित्यको बीजतŒव हो ? - Prateek Daily
स्वान्तः सुखायः स्वान्त सुखाय: स्वान्त–सुखाय
नकारात्मकता नै वर्तमान साहित्यको बीजतŒव हो ?
on 10:48:00 PM0Comment
साहित्यको उत्पत्तिको कारणको विषयमा पूर्वीय साहित्यशास्त्रहरूले व्यक्तिभित्र निहित प्रतिभा हो । प्रतिभापछि साहित्य जन्मिने कारण व्युत्पत्ति र तेस्रो कारण अभ्यास मानेका छन् । पाश्चात्य साहित्यशास्त्रीहरूले भने अनुकरणलाई पनि साहित्य जन्मिने कारण मानेका छन् । अनुकरणले जीवनको अनुकरणलाई भनेका छन् । आत्मीय चेतना र सामाजिक परिवेश पनि साहित्यहेतु हुन्, पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्तकारको दृष्टिकोणमा ।
साहित्यको प्रयोजन वा साहित्यको उद्देश्यको विषयमा व्यापक विवाद रहेको छ । पूर्वीय काव्यशास्त्र अर्थात् साहित्यशास्त्रमा धर्म, अर्थ, काम र मोक्षलाई साहित्यको प्रयोजन मानिएको छ । यसैगरी, यश, आयु, कल्याण, बुद्धिविलास र लोकलाई उपदेश दिनु पनि साहित्यको प्रयोजनको रूपमा स्वीकारिएको छ । व्यवहारज्ञान, अमङ्गलनाश, परमानन्द, कान्तासम्मित, अन्तश्चमत्कारलाई पनि पूर्वीय साहित्यमा साहित्यको प्रयोजन स्वीकारिएको छ । बहुजन हितायलाई पनि पाश्चात्य साहित्यमा साहित्यको प्रयोजन थपिएको छ । नैतिक सन्तुष्टि, अहम्को प्रकाशन, धार्मिक दृष्टिले सुधारमुखी उपदेश, आत्मसन्तुष्टि, उदात्तता, सामाजिक उत्थान, सौन्दर्यको अभिव्यक्तिलाई साहित्यको प्रयोजन मानिएको देखिन्छ ।
साहित्यको उद्देश्य यदि यति नै हो भने अहिले साहित्य लेखिन्छ किन ? पूर्वीय तथा पाश्चात्य साहित्यका विद्वान्हरूले तोकेबमोजिम तथा देखाएबमोजिमका उद्देश्यहरूमा आधारित साहित्यको सिर्जना यति धेरै गरिएका छन् कि यिनीहरूबारे अब साहित्य लेखिनु औचित्यहीन छ । आत्मप्रकाशन वा आत्मसन्तुष्टिलाई यदि छोड्ने हो भने अन्य उद्देश्य वा प्रयोजनसँग सम्बन्धित यदि धेरै साहित्य लेखिसकिएका छन् कि लेखिनुको औचित्य छैन । साहित्यका अनेक विधामा विश्वभरि यति धेरै साहित्य लेखिएका छन् कि सबैको अध्ययन र पठनले साहित्यको उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ । साहित्यको अध्ययन र पठनको संस्कृति पहिलेअनुरूप नै छ त ?
शिक्षा र चेतना बढेको मानिन्छ किनभने प्रमाणपत्रधारीको सङ्ख्या बढेको छ । शैक्षिक योग्यताका वैयक्तिक विवरणहरू बढ्दै जाँदा साहित्यको पठन र अध्ययन बढ्न सकेको छैन । शिक्षाले चेतना बढाउँछ भन्ने कुरा सत्य हो तर साहित्यको चेतना वा अध्ययनको चेतनामा वृद्धि गर्दछ भन्ने कुरो होइन । हरेक जिल्लामा यति धेरै कलेजहरू खुलेका छन् तर कुनै पनि जिल्लामा साहित्यका कृति कति बिक्री भएका छन् भन्ने तथ्यबाट पनि प्रस्ट छ ।
साहित्यको लेखनमा कमी आएको छैन । साहित्यको पठनमा पनि तुलनात्मकरूपमा वृद्धि नै भएको हो । जनसङ्ख्या अत्यधिक बढेको कारण साहित्यसिर्जनामा केही वृद्धि भएको हो । साथै साहित्यसिर्जनामा केही मानिसहरू निकै तल्लीन भएर लागेका छन् । भाषा र साहित्यको सेवा गर्ने निष्काम व्यक्तिहरूको निरन्तरको प्रयासले आपूmलाई र अरूलाई पनि साहित्यको सेवामा लगाउने गरेका छन् ।
साहित्य लेख्नेहरूले लेखिरहेका छन् । निरन्तर लेखिरहेका छन् । लेख्नेहरूलाई विषयवस्तुको कहिल्यै कमी हुने गरेको छैन । साहित्य लेख्नेहरूले विषयवस्तुलाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । नयाँ विषयवस्तु पनि पस्किने गरेका छन् । पुरानालाई नयाँ रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।
वास्तवमा साहित्यमा के लेखिने गरेको छ ?
साहित्यमा लेखिनुपर्ने सबै कुरा पहिले नै लेखिसकेका छन् र अब केही पनि लेखिनलाई बाँकी छैन भन्नेहरूले पनि साहित्य लेख्ने गरेका छन् । साहित्यको मूल विषयवस्तुमा नकारात्मकता हुनुपर्छ वा हुनैपर्छ । जतिसुकै सानो वा लघुरचना भएपनि त्यसमा दुई प्रकृति हुनु अनिवार्य छ । साहित्यमा विरोधाभास हुनैपर्छ । हो, आत्मप्रकाशन वा आत्मसन्तुष्टि यदि सार्वजनिक प्रकाशनका लागि होइन भने द्वन्द्व हुनुपर्दछ । त्यो द्वन्द्व भनेको विरोधाभास पनि हो । साहित्यमा विरोधाभासको ठूलो महŒव छ । नकारात्मकता नै साहित्यलाई दिने जीवनमार्ग हो । के नकारात्मकता नै वर्तमान साहित्यको बीजतŒव हो त ?
यात्रासाहित्य वा नियात्रा लेख्नेहरूले आपूmले देखेको र आपूmले भोगेको संसार देखाएर दुई परिवेशको आन्तरिक सङ्घर्षलाई उजागर गरेका हुन्छन् । कतैको मोहकतालाई प्रस्तुत गर्दा पढ्नेको मोहकतालाई अझ आकर्षित गरेको हुन्छ, जसले गर्दा पाठकमा साहित्यप्रति अभिरुचि वृद्धि हुन्छ । साहित्यको लेखनमा आप्mनो अभिरुचिको जति महŒव हुन्छ, अरूको अभिरुचिको पनि उत्तिकै महŒव हुन्छ । आत्मप्रकाशनले पनि अरूलाई प्रभावित पार्नुपर्दछ, यदि यो प्रकाशनयोग्य छ भने । हो, आत्मप्रकाशन वा सन्तुष्टिको लागि गरिने लेखनमा प्रकाशनतŒव रहन्छ भने अरूले पढ्ने के वा अरूले किन पढ्ने भन्ने पक्ष उत्तिकै बलियो भएर आउँछ ।
उसो भए साहित्यको वर्तमान बीजतŒव नकारात्मकता नै हो त ?
एकजना साहित्यकारले के पनि भनेका छन् भने साहित्यको मुख्य विषयवस्तु अहिले भ्रष्टाचार हुन पुगेको छ । नैतिक भ्रष्टाचारलाई वर्तमान साहित्यबाट झिकिदिने हो भने लेख्न र पढ्नलाई शायदै साहित्य रहन्छ वर्तमानका । जताततै मान्छेका नैतिकतामाथि प्रश्न उठाइएका छन्, द्वैध चरित्रको पर्दाफास गरिएको छ, आचरणको घाम र छाया गरी दुई पाटोलाई देखाएका छन्, उज्यालोको अनुहार र अँध्यारोको चरित्रलाई रेखाङ्कन गरिएका छन्, सिद्धान्त र व्यवहारको विपरीतताप्रति प्रश्न उठाइएका छन्, जीवनको लक्ष्य र बाटोप्रति कटाक्ष गरिएका छन् । वास्तवमा यी कुराहरूलाई विचार गर्दा ती साहित्यकारका कुरामा विश्वास गर्न मन लाग्छ ।
उसो भए साहित्य लेख्न बन्द गर्नु राम्रो हुन्छ त ? कदापि होइन । जसरी हरेक बालकलाई कुनै पनि शिक्षा प्रारम्भदेखि नै सिकाइन्छ वा सुरुआत गरिन्छ । त्यसैगरी, साहित्यमा लेखिएका कुराहरू पनि समयानुकूल फेरिफेरि र फेरि लेखिंदै जानुपर्दछ । हरेक वर्तमानले साहित्यमा आप्mनो भूमिकाको खोजी गर्नुपर्दछ । हरेक नकारात्मकतामाथि नकारात्मक साहित्य लेखिनुपर्दछ, जसमा सकारात्मकताको उज्यालो आशा होओस् । जबसम्म सबै किसिमका अँध्याराहरू हट्दैनन्, तबसम्म साहित्यमा पनि नकारात्मकता प्रमुख भएर आउनुलाई अस्वाभाविक मानिनुहुन्न । हो, अत्यधिक अँध्यारो समयमा अत्यधिक उज्यालोको आवश्यकता पर्दछ । कहिलेकाहीं उज्यालोलाई पनि उज्यालोको आवश्यकता पर्दछ । हो, सकारात्मक गन्तव्यलाई पनि सकारात्मक बाटो चाहिन्छ । सकारात्मक बाटोलाई पनि सकारात्मक विचार भएका बटुवा चाहिन्छ । सकारात्मक बटुवालाई सकारात्मक वातावरण चाहिन्छ । यस प्रकार सर्वत्र क्षेत्रमा सकारात्मकता भएपनि साहित्यले अझ सकारात्मकता किन खोज्छ भने फेरि कतै नकारात्मकताको बीउ वा अंश त बाँकी छैन ?
यस अर्थमा नकारात्मकता नहुँदो हो त साहित्य नै जन्मिने थिएन भन्नु साहित्यमाथि अन्याय हो । साहित्यमाथि अन्याय हुँदा पनि साहित्य रमाउँछ । साहित्य किन आप्mनै अन्यायमाथि रमाउँछ भने यसमा त्यो सामथ्र्य रहेको छ । साहित्यका नौ रसमध्ये एक करुण रस पनि हो । करुण रसले रुवाउँछ । हो, यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई ओगट्दछ भन्नुको कारण यही हो । यसको क्षेत्र विशाल छ वा यो विशालताभन्दा पनि विशाल छ भन्नुको कारण यही हो । जसरी विकासको चाहनाको सीमा हुँदैन, उसैगरी साहित्यको सीमा पनि सीमाविहीन छ । यसले नकारात्मकता मात्र बोक्दैन । नकारात्मकतालाई पनि चिनाउन नकारात्मकता बोकेको हो । जसरी अँध्यारोलाई पनि आप्mनो अनुहार देखाउन उज्यालो चाहिन्छ अर्थात् अँध्यारोको फोटो खिच्न पनि उज्यालो त चाहिन्छ नि । वर्तमान साहित्यमा देखिएको समाज सुधारको घनीभूत चाहनाले समाजमा चेतनाको एउटा नवीन प्रवाह
ल्याइरहेको छ, जसको प्रवाहमा आपैंm समाज हेलिएको थाहा पाएको छैन । कहिलेकाहीं आपूm गतिशील भएको थाहै हुँदैन र अरूलाई देखेपछि उही
गतिशील लाग्दछ, आकाशमा कहिलेकाहीं चन्द्रमा हिंडेको र बादल स्थिर
बनेकोजस्तै । आपूm बसेको र रेलबाहिरको सबै दृश्य गतिमान बनेको जस्तै भ्रम साहित्यमा नकारात्मकताको सन्दर्भ पनि हो कि ?
Archive July (125) June (578) May (571) April (536) March (388) February (297) January (356) December (320) November (365) October (338) September (377) August (403) July (415) June (394) May (406) April (361) March (312) February (381) January (344) December (217) November (182) October (176) September (197) August (199) July (232) June (250) May (212) April (209) March (199) February (213) January (213) December (238) November (208) October (194) September (213) August (198) July (207) June (234) May (224) April (234) March (232) February (274) January (317) December (305) November (255) October (269) September (287) August (241) July (272) June (276) May (265) April (243) March (266) February (253) January (206) December (206) November (233) October (212) September (274) August (228) July (203) June (191) May (218) April (213) March (191) February (209) January (225) December (245) November (184) October (163) September (164) August (178) July (173) June (169) May (168) April (177) March (194) February (161) January (208) December (198) November (149) October (148) September (175) August (201) July (208) June (200) May (218) April (168) March (193) February (194) January (202) December (226) November (186) October (231) September (229) August (199) July (197) June (160) May (192) April (199) March (276) February (627) January (235) December (183) November (158) October (139) September (144) August (149) July (130) June (142) May (132) April (133) March (107) February (139) January (160) December (158) November (132) October (149) September (185) August (166) July (154) June (135) May (33)